Sidee loo Diiwaan Streaming Video la Online video taariikhqorihii
> Resource > Video > Sidee loo Diiwaan Streaming Video
Maalmahan, dad badan ay tagaan goobaha video sida YouTube si uu u daawado filimada ay jecel yihiin ama videos music. Si kastaba ha ahaatee, videos ama music ka goobahan sida caadiga ah aan si fudud loo soo bixi karaa. Maxaad samayn kartaa haddii aad rabto in loo maqli karo ee offline videos on kombiyuutarada shakhsi ama aaladaha la qaadi karo ee? Haa, waxaad ku qori karta videos geeyo ka websites ah, waana wax ka sii fiican in aad si toos ah u soo bixi kartaa video geeyo ah. Waxaan halkaan idinkugu laba qalab si aad uga hesho videos hoorto via video screen qoro Abd toos video dajinta.
Qeybta 1: Sida lagu helo hoorto video dhex screen duubo video
Qeybta 2: Sida loo helo video hoorto dhex dajinta toos ah
Qeybta 1: Sida lagu helo video hoorto dhex screen duubo video
Bal aan marka hore ku arki hordhaca ah ee barnaamijka, ka dibna hubi tallaabooyinka faahfaahsan lagu qoro hoorto video la.
2. Record video la daadan khasaaro eber tayo leh
Sida loo isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate si ay u qoraan hoorto video
Tallaabada 1. Ku rakib video taariikhqorihii geeyo ah
Download barnaamijkan oo ku xidh. Waxaa Launch dib markii la rakibey oo waxaad hor mari doontaa inay suuqa kala ah sida mid ka mid ah oo ku saabsan xaq u.
Tallaabada 2. Record geeyo video
Hit ah Start menu of your computer in la helo Wondershare Video taariikhqorihii. Riix ikhtiyaarka oo taga si ciyaaro video online. Ka dib markii barnaamijka la ogaado video ah, laydi oo cas oo hareerayn doonaa shaashadda video iyo sidoo kale fursado dhowr ah ka muuqan doontaa bidix ee sare. Guji ka button inuu ku soo bilowdo diiwaan video ah.
Marka aad joojiso duubay, ee file video diiwaan toos ah ku tusi doonaa in aad hore. Haddii aad u baahan tahay si loogu badalo video ah, oo aad barnaamijka dajiyaan karaa video mar kale si ay u helaan waxa ay u sarifay.
Qeybta 2: Sida loo helo hoorto video iyada oo si toos ah dajinta
Bal aan marka hore ku arki hordhaca u Wondershare AllMyTube ka dibna hubi tallaabooyinka faahfaahsan degsado hoorto video la. Ogow in dhammaan websites video ka taageeraan dajinta toos ah. Haddii aad soo gaarto qaar iyaga ka mid ah, fadlan ka qayb 1 caawimaad iyo straightly diiwaan durdurrada online.
1. Download videos ka badan goobaha video geeyo sida YouTube, vimeo, Dailymotion iyo wax ka badan
3. A Task jadwaliye iyo maamul taageero iyo ciyaaro videos
Download barnaamijkan oo ku xidh. Marka aad u abuurtaan dib markii la rakibey, waxaad arki doontaa suuqa kala nadiif ah sida ku cad xaq.
Tallaabada 2. Download geeyo video
Burcad biraawsarkaaga oo heli videos geeyo aad rabto in aad ka. Riix ah Download button Midigta sare ee video markuu u bilaabo inuu ciyaaro. Markaas barnaamijka bilaabi karaan in ay soo bixi video isla markiiba. Ama waxaad nuqul ka kartaa URL ee videos geeyo iyo riix URL paste Button on suuqa kala aasaasiga ah ee barnaamijka si ay u bilaabaan soo degsado videos ah.
Haddii aad rabto in aad ka ciyaari videos ku kombuyuutarrada gacanta, fadlan guji badalo dooro qaab ama qalab aad rabto in aad sida hoos. Ka dib markii in, aad ku raaxaysan kartaa videos waqti kasta iyo meel kasta.